China N'ogbe ngwa ngwa akọrọ polyester Chiefs maka marathon mgbasa ozi na nhoputa ndi ochichi ahaziri sublimation t-uwe elu na-emepụta na suppliers | RE-HUO
N'ogbe ngwa ngwa polyester uwe elu maka marathon mgbasa ozi na mkpọsa ntuli aka ahaziri sublimation t-uwe elu
Typedị :dị: Sublimation t uwe elu
Ihe: Nhọrọ ọtụtụ akwa
Echeta: RE-HUO ma ọ bụ OEM
Usoro: Sublimation obibi
Agba: Ahaziri dị ka gị imewe
Nha: XS / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4xL / 5XL
Uwe T-shirt a kwesịrị ekwesị maka egwuregwu, mgbasa ozi, marathon, na ọrụ otu.
1. Na ngwaahịa akwa.
Maka ngwaahịa na-akpa ákwà, anyị MOQ bụ 50 iberibe t uwe elu na nke ọ bụla na-akpa ákwà, na ị nwere ike họrọ multiple nha.
Ọ bụrụ na nke a dị n'elu enweghị akwa ịchọrọ, anyị nwekwara ọrụ ọrụ ahaziri, anyị nwere ike ịhazi akwa dịka ihe ị chọrọ si dị, naanị ị ga-enye ihe nlele nke akwa ahụ, Anyị ga-ahaziri gị ya dịka akwa ahụ nye, The MOQ maka ahaziri akwa bụ 2000 T-Chiefs.
Send na-eziga gị imewe ka anyị na anyị ga-ebipụta ya dị ka gị arịrịọ, Ọ bụrụ na ị na-amaghị otú e si eme ka a T-uwe elu
imewe, ị nwere ike iziga anyị akara njiri mara gị ma ọ bụ echiche gị, onye nrụpụta anyị nwere ike mezue ya maka gị.
Maka mpempe akwụkwọ sublimation, Anyị nwere ike hazie ya dịka agba Pantone ị nyere.
Nke gara aga: Na Stock Sports t-shirt Blank na-agba ọsọ ọsọ ọsọ kpọrọ nkụ Men T Shirt maka Marathon
Osote: N'ogbe ọnụ ala bọl pinnies egwuregwu vest otu ọzụzụ okenye bọl bọl basketball basketball ọzụzụ Vests Training